Hoggaamiyihii Kooxdii Khaatumo oo Guul-darro weyn kala kulmay Doorashadii Baarlamaanka Soomaaliya | Somaliland.Org
Hoggaamiyihii Kooxdii Khaatumo oo Guul-darro weyn kala kulmay Doorashadii Baarlamaanka Soomaaliya
August 28, 2012	Muqdisho (Somaliland.Org)- Guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in Prof. Maxamed Cismaan Jawaari uu si rasmi ah u noqday afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya kaddib markiii uu tanaasulay Prof. Cali Khaliif Galleydh oo ay isugu soo hadheen wareeggii ugu dambeeyay.
Sida ay faafisay shabakada Hiiraan Online oo aanu warkan ka soo xiganay, Guddiga ayaa sheegay in Prof. Jawaari uu helay wareeggii koowaad 119 cod halkii laga doonayay 139 cod, balse tanaasulka uu sameeyay Prof. Galleydh ay sababtay inuu noqdo guddoomiyaha rasmiga ah ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Wareeggii koowaad ee doorashada ayaa shanta murashax ee xilka u tagaan waxay kala heleen Prof. Jawaari oo helay 119 cod, Prof. Cali Khaliif Galleydh oo 77-cod helay, Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo helay 23-cod, C/rashiid Maxamed Xiddig oo helay 10-cod iyo Xasan Abshir Faarax oo helay shan cod.
Saddexda murashax ee ugu codadka yaraa ayaa waxay ku dhawaaqeen inaysan ka qaybgalay doorashada wareegeedda labaad, iyadoo markaas ay isku soo hareen oo keliya Jawaari iyo Galleyn, inkastoo Galleyr uu mar dambe ku dhawaaqay inuusan ka qaygalay doorashada, taasina ay keentay in Prof. Jawaari uu noqdo guddoomiyaha baarlmaanka Soomaaliya.
Guddigu waxay sheegeen in 236 xildhibaan ay codadkooda dhiibteen, laba cod ay xumaadeen intii kalena la tiriyay, iyadoo dugsiga tababarka booliiska oo doorashadu ay ka dhacaysay aad loo adkeeyay ammaankeeda, waxaana halkaas ku sugnaa ciidammo fara badan oo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa AMISOM.
Dhina Kale Cali Khaliif Galaydh Hoggaamiyihii kooxdii Khaatumo seeg, ayay guul daradani u tahay waji-gabax kale oo soo waajahay ka dib markii wareegii koowaadba uu aqoonsaday guul-daradiisa.
Previous Post$21 Million awarded in torture suit against Mohamed Ali SamatarNext PostGudida doorashooyinka Somaliland Oo soo bandhigay qorshaha habsocodka hawlaha doorashada deegaanka	Blog